Disability Rights Ohio - Ku deeq
Taageeradaada dhaqaale ayaa ka caawin doonta Naafada Xuquuqda ee Ohio inay filiyaan hadafkooda si ay u ilaaliyaan uguna doodaan xuquuqda aadanaha, madaniga, iyo xuquuqda sharciga dadka naafada ah ee ku nool Ohio. Lacagtaada waxay naga caawin doontaa sii wadista shaqadayada ee u doodidda udub-dhexaadka u ah macmiilka. Dhammaan tabarrucaada waxaa laga goosan karaa canshuur waadna ku mahadsan tahay.
Ku deeq onlaynka:
Guji badhankan si aad ugu deeqdo onlaynka.
Ka dhig jeegaaga mid loo kahdimi karo Hay’adda Xuquuqda Naafada ee Ohio oo u dir:
Wixii macluumaad oo dheeraad ah:
Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan deeqaha, la xiriir Agaasimaha Fulinta Michael Kirkman.
Telefoonka: 614-466-7264; 1-800-282-9181 (Telefoon bilaash ah gudaha Ohio)
Hay’adda Xuquuqda Naafada ee Ohio waxay xaq u leedahay inay dib u soo celiso tabarrucaada laga helo urur, shakhsi, ama hay’ad kasta haddii aqbalaada tabarrucaadaasi abuuri doonto iskahorimaad dano ama muuqaalka iskahorimaadka danaha.